ORINASA - AOOD Technology Limited
Mpanamboatra peratra slip-miorina amin'ny haitao sy fanavaozana isika.
AOOD TECHNOLOGY LIMITED dia natsangana tamin'ny taona 2000 handrafetana sy hanamboarana peratra slip. Tsy toy ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra sy fanodinana hafa, ny AOOD dia mpamokatra sy mpamatsy solosaina miorina amin'ny haitao ary mifantoka amin'ny fanavaozana, mifantoka hatrany amin'ny R&D amin'ny vahaolana avo lenta 360 ° rotary interface tsara ho an'ny indostrialy, fitsaboana, fiarovana ary fampiharana an-dranomasina isika.
Ny orinasanay dia miorina ao Shenzhen any Shina izay teknolojia avo lenta R&D avo lenta sy fanamboarana any Shina. Ampiasainay tanteraka ny rojom-pivarotana indostrialy novolavolaina eo an-toerana sy ireo fitaovana lafo vidy e hanaterana ireo mpanjifa avo lenta fivoriamben'ny peratra elektrika. Izahay dia efa nanatitra fivoriamben'ny peratra mihoatra ny 10000 amin'ny mpanjifa ary mihoatra ny 70% no namboarina izay natao ho an'ny mpanjifa manokana. Ny injenieranay, ny mpiasa amin'ny famokarana ary ny teknisiana fivoriambe dia manolo-tena hanome slip peratra azo itokisana, azo antoka ary mahomby amin'ny fampisehoana.
Fivoriamben'ny peratra slip
Hitanay ny tenantsika ho mpiara-miasa amin'ny peratra slip izay manohana mavitrika ny mpanjifa amin'ny famoronana, fampandrosoana bebe kokoa ary famokarana vokatra. Nandritra izay taona lasa izay, dia manolotra tsipika feno momba ny peratra mahazatra sy fanao amin'ny slip miampy ny fanomezana serivisy injeniera mifandraika amin'ny fikorontanana matihanina ao anatin'izany ny famolavolana, fanahafana, famokarana, fivoriambe ary fitsapana. Ny mpiara-miombon'antoka AOOD dia manarona fampiharana isan-karazany manerantany ao anatin'izany ny fiara mifono vy, ny mpandeha an-tongotra maharitra na ny finday, ny ROV, ny fiara mpamono afo, ny angovo avy amin'ny rivotra, ny automatique automatique, ny robot manamboatra trano, ny CCTV, ny latabatra mihodina sns. AOOD dia mirehareha amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka sy vahaolana tokana momba ny fivondronan'ny peratra.
Ny orinasan-tsika dia manome fitaovana famokarana mandroso sy fanandramana ao anatin'izany ny milina fanorohana tsindrona, lathe, machine milling, tester integral an'ny slip ring, generator signal matetika, oscilloscope, tester an'ny encoder, metatra toradroa, rafitra fitsapana fanoherana mavitrika, tester fanoherana fanoherana, diélectric tester tanjaka, mpandinika mari-pamantarana ary rafitra fitsapana fiainana. Ankoatr'izay, manana ivon-toeram-pivarotana milina CNC misimisy sy atrikasa famokarana madio izahay mba hamokarana fepetra takiana manokana na vondron-tsolika mahazatra.
Ny AOOD dia mifantoka hatrany amin'ny famolavolana vahaolana fifampikasohana vaovao ary hihaonana amin'ny fangatahana fampiharana vaovao. Ny fangatahana namboarina dia tongasoa.